Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao - [International Consulting]
> Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Ahoana ny famindrana tranokalan'ny sitepress amin'ny sehatra vaovao
1 - Ahoana no fandefasana ny tranonkala wordpress
3 - Fichier ny mysql database ny Wordpress
4 - tranokala tranokala Wordpress
5 - Mampidira tranonkala wordpress
6 - Wordpress amin'ny sehatra
Ahoana ny famindrana tranokala WordPress amin'ny sehatra vaovao
Ahoana ny fomba hamindrana tranokalan'ny WordPress ho an'ny mpampiantrano vaovao
Rehefa miova ny mpampiantrano, na te hiditra amin'ny sehatra vaovao, dia misy ampahany vitsivitsy izay tokony hatao amin'ny fametraHANA ny Wordpress mba ahafahany miasa indray amin'ny endrika vaovao.
Wordpress.com Mamoròna tranokala maimaim-poana na blôgy
Na izany aza, manaraka an'ity toro-lalana ity, tokony ho mora ny miala amin'ny tranokalan'ny sitepress amin'ny sehatra vaovao!
Toy izany koa ny fomba handikana tranonkala iray amin'ny tranonkala iray avy amin'ny sehatra iray amin'ny iray hafa, satria ny tranokala voalohany dia tsy voatery ho voakilasy.
cheap company hosting companies
Azo atao ny mamintina ireo hetsika ireo:
1 - Manangona ary mamerina amin'ny tranonkala vaovao ny tranonkalan'ny WordPress,
2 - Fikirakirana tranonkala Wordpress,
3 - WordPress rohy mankany amin'ny sehatra.
Voalohany indrindra, amin'ny fampiasana mpanjifa FTP, mifandray amin'ny mpizara, ary maka ny lahatahiry rehetra misy ny rakitra WordPress. Ity hetsika ity dia haka fotoana kely, arakaraka ny haingam-pifandraisana eo an-toerana sy ny serivisy, dia mety ho afaka ora vitsivitsy izany.
FileZilla ny vahaolana FTP
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Ny tranonkala fanontam-pirinty amin'ny tenypressme
Na dia mbola mitohy aza ity asa ity, aza misalasala ny HANAo ny dingana manaraka, ny fifindra-monina ny habaka Wordpress.
Ny tranokala eo an-toerana dia tokony ahitana rakitra rehetra, anisan'izany ny rakitra miafina toy ny .htaccess (rakitra miaraka amin'ny anarana manomboka amin'ny dot dia rakitra miafina ao amin'ny Linux).
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Vohikala wordpress no nanoHANA
2 - Manangona tahirin-tserasera amin'ny server iray mankany amin'ny hafa
MandeHANA eo amin'ny loham-piainana taloha, sokafy ny tahirin-tsoratra Wordpress, ary mifidiana ny asa fanondrotana.
MySQL, rafitry ny fitantanana ny tambazotra mifandraika amin'ny loharanom-baovao
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : MySQL fandefasana ny tranokala tranokala amin'ny tranokala
Eto fotsiny, azonao antoka fa SQL ny safidy mifidy ary tsindrio ny fanondranana.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : tahiry
Miankina amin'ny habe sy ny haingon-tserasera ny rakitra iray tokony ho azo alaina aorian'ny minitra vitsivitsy. Izy io dia ahitana ny tahirin-tsakafo wordpress, ary tokony ho voavonjy ao amin'ny solosaina.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Midio ny tahirin-tsoratra Wordpress amin'ny mpizara vaovao
Amin'izao, amin'ny lohamilina vaovao, sokafy ny fitantanana tranonkala fampiantranoana webmaster na tranonkala fitantanana tranokala hafa, ary tadiavo ny MySQL Databases. Alohan'ny hividianana ny angona, dia tokony hapetraka ny rafitra vaovao, ny mpampiasa, ary ny fidirana amin'ny mpisera amin'ny database.
cPanel, sehatra fampiantranoana manan-danja
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Ny rakitra MySQL ao amin'ny hosting cPanel
Eto, manomboka amin'ny famoronana daty vaovao, manome azy anarana.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Famoronana angon-drakitra vaovao ho an'ny Wordpress migadra
Avy eo, ampio mpampiasa iray vaovao, miaraka amin'ny tenimiafina tsara - fampifangaroana taratasy, tarehimarika, tarehin-tsoratra manokana. Tsy tokony hotsaroana akory ny tenimiafina, fa ny kopia sy ny fametraHANA indray mandeha, dia mamonjy izany amin'ny toerana iray eo an-toerana raha toa ka misy ny "Notepad open ++" misokatra ny dingana manaraka.
Notepad ++ mpamoaka loharanon-tsoriaka
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Manampy mpampiasa vaovao ho an'ny tahiry MySQL
Ary farany, ampio ny mpampiasa noforonina ao amin'ny daty, miaraka amin'ny fidirana rehetra, satria ity mpampiasa ity dia ho mpandrindra ny tahiry ho an'ny Wordpress.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Alefaso ny mpampiasa ny data MySQL
Ankehitriny, sokafy ny tahiry MySQL ao Phpmyadmin, ary mandeHANA mankany amin'ny safidy import. Toy izao no hitranga amin'ny fomba ofisialy ny fandefasana ny WordPress.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : wp mivadika db import
Eto ny fichier izay efa noforonina aloha, soraty fa ny format voafidy dia ny SQL, ary koa tsindrio ny boaty fandefasana ampahany. Tena zava-dehibe ho an'ny tranokala lehibe izany, satria mety handany fotoana bebe kokoa ny script raha te hanondrana ilay daty.
Amin'ny famoaHANA ity boaty ity, ny script dia tsy mijanona amin'ny fampidirana ny angona raha toa ka mahatratra ny famonoana ny fahatanteraHANA izany, izay izay tiantsika hatao eto.
Ary mazava ho azy, manomboha ny fandidiana ny fandrafetana ny banky amin'ny fipiHANA OK.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Safidy imailaka sôlimp amin'ny phpmyadmin
Rehefa vita ny entana Sql dia tokony haseho amin'ny phpmyadmin ny hafatra mahomby.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Sora-bolana sora-bolana
Ankehitriny fa ny rafitra dia rafitra, fotoana izao hiteny amin'ny tenypressy momba an'ity daty vaovao ity, amin'ny fanokafana ny rakitra wp-config.ini amin'ny backup local. Koa satria ity rakitra ity dia hita ao amin'ny lahatahiry root, dia azo inoana fa ny iray amin'ireo tahiry voalohany tokony halefa, ary tokony ho azo atao na dia mbola tsy vita aza ny famindrana.
Na izany aza, raha mbola tsy misy io rakitra io, miandry fotsiny ny famindrana ho vita.
Ao, tanisao ireto andalana manaraka ireto ary ampifanavao ny anaran'ny nomerao, ny mpampiasa ny database, ary ny tenimiafina ny data miaraka amin'ireo sanda avy amin'ny dingana teo aloha ao amin'ny cpanel:
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Manavao fikandrana database database
Raha navotsotra avy amin'ny loham-piainana taloha ny angona ofisialin'ny WordPress, dia izao no fotoana hanomboHANA hampakatra tranonkala sitepress amin'ny server, mbola mampiasa mpanjifa FTP.
Lokoy ny tranonkalan'ny tranonkala ho amin'ny sehatra vaovao : Ampidiro ny tranonkala wordpress
Ity hetsika ity dia mety haharitra raha toa ka maka ny angon-drakitra, dia maka fotoana ary manana kafe =)
Raha tsy manova ny anaran'ny sehatra ianao dia tsy ilaina izany dingana izany.
Na izany aza, raha toa ka mihetsika tranokala wordpress amin'ny sehatra vaovao ianao, avy amin'ny anarana iray ho an'ny iray hafa, dia tokony havaozina ny rohy rehetra, mba hampisehoana ny URL vaovao fa tsy ilay taloha.
Mba HANAovana izany mora, manomboka amin'ny Search Replace DB.
Ny fikaroHANA PHP dia manolo ny fitaovana ahafaHANA mametaka strings amin'ny daty
Ny fanovana ny tranokalan'ny tranonkala dia mety ho asa sarotra. Raha sendra olana dia jereo ny antontan-taratasy ofisialy.
Ny fanovana ny vohikala URL - codex wordpress
Hanova ny tranokala cpanel addon domain
7 - Ahoana ny famindrana tranonkala iray amin'ny tranonkala amin'ny sehatra hafa
Tokony hatao izao! Na dia izany aza dia mety tsy ho hita ny dingana iray, izay ny manamboatra ny server vaovao dia ahafahan'ny URL, izay vita amin'ny alàlan'ny fanovana DNS.
Ity hetsika ity dia afaka miakatra hatramin'ny 24 ora mba ho hita, noho izany dia manàna faharetana raha mbola tsy miasa ny URL, mety ho noho ny tsy fisian'ny aterineto manontolo momba ny tranokalanao vaovao.
Ity dingana ity, izay antsoina hoe DNS replication, dia mety handany fotoana, mandra-pahatongan'ny Internet manontolo ny adiresin'ilay tranonkala vaovao amin'ny anaran'ny sehatra.
Ny fampiantranoana tranonkala tsara indrindra ho an'ny orinasa madinika
Ny tranonkala Moving WordPress amin'ny sehatra vaovao dia tena mora tokoa. Raha te handefa tranokalan'ny WordPress amin'ny sehatra vaovao ianao, dia tanteraho tsotra izao ireto dingana fototra ireto:
- Alefaso ny doka WordPress amin'ny alàlan'ny servisy taloha mankany amin'ny sehatra vaovao,
- Kopio ny WordPress rakitra avy amin'ny loham-piainana taloha mankany amin'ny sehatra vaovao,
- Manavao ny rakitra wp-config.ini miaraka amin'ny fikirakirana fifandraisana vaovao,
- Mamaha ny adiresy ao amin'ny daty, raha toa ka tsy mitovy amin'ny sehatra teo aloha ny sehatra vaovao.
Raha toa ka manao site-alaina karazana WordPress ho an'ny mpampiantrano vaovao ianao, dia tsy ilaina ny dingana farany, satria mbola mitovy ny adiresy URL.
Raha mifindra amin'ny sehatra vaovao ianao, ary tsy mitovy ny URL, dia ny dingana farany dia tsy maintsy atao, satria ny URL sasany dia manana ny anaran-tsoratra taloha, ary ny famindrana ny tranonkala WordPress ho any amin'ny sehatra vaovao dia tsy maintsy manatanteraka io fepetra io mba hananana URL marina ny tahiry WordPress.
Dingana iray amin'ny Torolàlana amin'ny fampivelarana ny WordPress tranonkala ho an'ny tranonkala vaovao
tranonkala tsara indrindra ho an'ny orinasa madinika, tranokalan'ny tranokala ho any amin'ny sehatra vaovao, drakitra, cpanel web hosting, cpanel hosting, Ahoana ny fomba famindrana tranonkala iray amin'ny tranonkala amin'ny sehatra hafa, Ahoana no fomba handefasana tranokalan'ny tranokala mankany amin'ny sehatra vaovao, Ahoana ny fomba hamindrana tranokalan'ny WordPress ho an'ny mpampiantrano vaovao, Mandika tranonkala tranokala mankany amin'ny sehatra vaovao, birao fandikana amin'ny teny arabo, Ahoana ny fandefasana ny tranonkala wordpress, dinika, dinika, mampakatra tranokala tranonkala, fifanakalozan-kevitra, ManoHANA sy mamerina amin'ny tranonkala vaovao ny tranokalan'ny Wordpress, Mifindra avy any amin'ny server iray mankany amin'ny iray hafa, Mandrindra ny tahirin-tsoratra Wordpress amin'ny mpamaky vaovao, Mandefa tranonkala tranonkala ao amin'ny server, fampiasana mysql amin'ny teny mysql, Wordpress backup ary mifindra monina, Ny tranonkala fanontam-pirinty amin'ny tenypressme, tranokalan'ny tranokala wordpress, rohy WordPress amin'ny sehatra, famindrana tranonkala cpanel, Wordpress import sql, wp mivadika db import, Hampiditra ny Wordpress sql, tahiry,
Anarana* Email* Website Comment*